Isinqumo sebheyili kwelaMchunu | News24
Isinqumo sebheyili kwelaMchunu
Abalandeli bakaMsawenkosi Maqatha Mchunu ngaphandle kwasenkantolo.ISITHOMBE: sigciniwe
ABASOLWA abayisithupha okubalwa kubona nekhansela laku-ward 10 uMnu Nkosinathi Gambu bazokwazi kusasa ngekusasa labo njengoba kulindeleke ukuba kuphume isinqumo ngesicelo sabo sebheyili kusasa (ngoLwesihlanu) mhla zingama-23 kuLwezi (November).
UMnu Gambu kanye nasolwa nabo okubalwa kubona uSkhanyiso Zimu, Sfiso Mbelu, Mlungisi Zimu, Ayanda Ngubane kanye noGift Zungu babhekene namacala ahlukene okubalwa kuwona nelokubulala uMnu Msawenkosi “Maqatha” Mchunu nowadutshulwa wabulawa ngenyanga kaNhlaba (May) kuwona lo nyaka.
Abasolwa sebechithe isikhathi esingaphezu kwezinyanga ezimbili bebhadle esitokisini kanti ukulalelwa kwesicelo sabo sebheyili kona kudonse isikhathi esithi asibe yinyanga yonke.
Bonke abasolwa bayawaphika la macala bathi ayikho into ebahlanganisa nawo kanti futhi asikho isizathu esasingabenza ukuba baze bafune ukubulala uMchunu.
Lowo omele umbuso u-Adv Rene Padayachee uthi umbuso uyaphikisana nokuthi abasolwa badedelwe ngebheyili kwazise bayingozi emphakathini.
NgoLwesihlanu wesonto eledlule kugoqiwe ukulalelwa kwesicelo sebheyili kanti sekulindeleke ukuba iMantshi u-Adv Vincent Mncanyana akhiphe isinqumo..
Lowo omele umbuso uNks Padayacheee uthe ngelanga okwadutshulwa ngalo uMnu Mchunu kwangena ucingo emaphoyiseni livela kumuntu owazichaza njengomngani kaGambu olwaluthi amaphoyisa awaphuthume emzini kaMnu Gambu ngoba uyahleselwa nothi umbuso konke lokho kwakungamampunge nje.
Kuthiwa amaphoyisa afica uMnu Gambu kwakhe wabe esewacela ukuba ahlale ahlole isimo wawacela nokuba ahlale isikhashana aqaphe isimo ngoba wayesabela ukuthi abahlaseli bakhe bangaphinde babuye bazohlasela.
UNks Padayachee uthe bekusezandleni zabasolwa ukuba kube yibona abaveza izizathu ezinqala ezingenza ukuba badedelwe ngebheyili.
Amalunga omphakathi ahlukene phakathi ngalolu daba njengoba selokhu abasolwa baqala ukuvela enkantolo kunezinhlangothi ezimbili; labo abeseka uMnu Mchunu kanti abanye beseka uMnu Gambu kanye nasolwa nabo.